पत्रकारले राष्ट्र र समाजलाई सम्झौं : काउन्सिल अध्यक्ष कार्की - NewsPolar NewsPolar
पत्रकारले राष्ट्र र समाजलाई सम्झौं : काउन्सिल अध्यक्ष कार्की
१० भाद्र २०७२, बिहीबार १४:०६
देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेका छन् । ती आन्दोलनका समाचार र आन्दोलनसँग सम्बन्धी सामग्रीहरुले नै सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेको आरोप छ । यसै सन्दर्भमा मिडियालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीका केही अंशहरु :
कैलाली लगायत देशमा भइरहेका आन्दोलनबारे मिडियामा कस्ता कस्ता सामग्रीहरु आएका छन् ?
कैलाली घटनाको सम्बन्धमा समाचार सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्दा खेरी त्यहाँको भएको यर्थाथ विवरण के हो ? सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमहरुले गर्नुपथ्र्यो । तर केही सञ्चार माध्यममा के देखियो भने हतार हतारमा समाचार बनाउने गरेकाले ८ जना मरेको पुष्टि भयो । २०–२२ जना मरेका छन् भन्ने गलत सूचना दिने जस्ता प्रवृत्तिका कामहरु भए । साथै केही घटनाको विषयमा समाचार सामग्री प्रकाशित गर्दा खेरी त्यो उत्तेजनालाई अझ उत्तेजना बढाउने किसिमका समाचार सामग्रीहरु प्रकाशित भएका देखिए । यस्तो उथलपुथल र सामाजिक सद्भाव खल्बलिरहेको स्थितिमा केही सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेका प्रसारण गरेका सामग्रीहरुले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउने, सामाजिक सद्भावलाई अझ बिगार्ने देखा परेको छ ।
यस्तो थाहा पाउँदा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के भयो ?
यो सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपाल धेरै गम्भीर छ । हामी अनुगमन गरिहेका छौं । त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई हामीले सचेत गराइरहेका छौं । यदि अहिलेको परिस्थितिलाई बिर्गानको लागि आचार संहिताको उल्लंघन हुने कार्य हुन्छ भने काउन्सिल आचार संहिता अनुरुप कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छ । यो बडो संवेदनशील घडि हो । सामान्य परिस्थिति होइन । यति बेला राष्ट्रलाई सम्झेर, नेपाली समाजलाई सम्झेर यहाँ द्वन्द्व गराउने भन्दा पनि समस्यालाई समाधान कसरी गराउने भन्ने दिशातर्फ सञ्चार माध्यम र पत्रकार लाग्नुपर्छ ।काउन्सिलले अब कारबाही नै गर्छ त ?
हामीले सामुहिक रुपमा पनि अनुरोध गरेका छौं । सचेत गरेका छौं । साथै जसले गम्भीर रुपमा आचार संहिताको उल्लंघन गरेको छ । त्यो विषयमा सोधखोज गर्ने कारबाहीको प्रक्रियामा राखेर शुरुवात गरिरहेका छौं ।
सामाजिक सद्भाव कायम गर्न मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यस्तो संवेदनशील घडीमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भूमिका ज्यादै उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारबाट गरिने सामान्य गल्तीले पनि मुलुकले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसतर्फ सबै सञ्चार माध्यम र पत्रकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।